Thu, Jul 19, 2018 | 21:08:30 NST
लू का कारण पछिल्लो २४ घण्टामा कम्तिमा १८ जनाको मृत्यु
जेठ २३ – भारतको पश्चिम बंगालमा लू का कारण पछिल्लो २४ घण्टामा कम्तिमा १८ जनाको ज्यान गएको छ । गर्मीले सबैभन्दा धेरै बद्र्धमान जिल्लामा ९ जना तथा पुरुलिया र कोलकातामा ३/ ३ तथा हावडामा २ र मिदनापुरमा एक जनाको ज्यान गएको भारतीय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नाइजेरियामा विमान् दुर्घटना, १ सय ५० यात्रुको मृत्यु
जेठ २२ – नाइजेरियाको व्यापारिक शहर लागोसमा विमान दुर्घटना हुदा कम्तिमा १ सय ५० यात्रुको ज्यान गएको छ । विमानमा चालक दलका सदस्य सहित १ सय ५३ जना यात्रु रहेको बताइएपनि पुष्टि हुन नसकेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
पुरुषसँग बोल्दा पनि महिलाको अनुहार चम्किलो हुन्छ
जेठ २१ - पुरुषसँग भेटेर कुरा मात्रै गर्दा पनि महिलाको अनुहार चम्किलो हुने र तापक्रम बढ्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । स्कटल्याण्ड सेन्ट एन्ड्रयूज विश्वविश्व विद्यालयका शोध कर्ताले पूरुषसँग यौन सम्बन्ध नराखेर पनि महिलाको अनुहारको तापक्रम बढ्ने अनुसन्धानका क्रममा स्पष्ट देखिएको हो ।
सुत्केरी बिदाको अवधी घटाउने प्रस्तावको बिरोध
जेठ २१ – बंगलादेशमा महिला अधिकारवादी र स्वास्थ्यकर्मीले महिलालाई दिने सुत्केरी बिदाको अवधी घटाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । कपडा उद्योगमा कार्यरत महिलाका लागि उद्योगहरुले ल्याएको प्रस्तावमा सुत्केरी भएपछि दिने बिदाको अवधि १६ हप्ताबाट घटाएर १२ हप्ता कायम गरिने उल्लेख गरिएपछि विरोध चर्किएको छ ।
अवतरणका क्रममा विमान यात्रुबसमा ठोक्कियो, १० जनाको मृत्यु
जेठ २१ – घानाको राजधानी आक्रामा कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । नाइजेरियाको लागोसबाट उडेको विमान् अवतरणका क्रममा विमानस्थल नजिकै रहेको यात्रुबसमा ठोक्किँदा बसमा सवार १० जना यात्रुको ज्यान गएको अधिकारीहरुले पुष्टी गरेका छन् ।
अन्ना हजारे र रामदेव फेरी अनशनमा
जेठ २१ – विदेशमा जम्मा भएको कालो धन र भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका भारतीय सामाजिक पार्टीका कार्यकर्ता अन्ना हजारे र योग गुरु रामदेव फेरि अनशनमा बसेकाछन् । हजारे र रामदेव आज दिल्लीको जन्तरमन्तरमा एक दिने अनशनमा बसेका भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मुबारक मृत्युदण्डबाट कसरी जोगिए ?
जेठ १८ - इजिप्टमा ३० वर्षसम्म शासन गरेका होस्नी मुवारक सत्ताबाट जेलमा पुगेका छन् । सन् २०११ को सुरुवातसँगै सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ८४ वर्षीय मुवारकलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । १० महिनासम्म चलेको सुनुवाइका क्रममा मुबारकले मृत्युदण्ड पाउने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर सवैको अनुमान विपरित उनलाई मृत्युदण्ड नदिई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ ।
होस्नी मुबारकलाई जन्मकैद
जेठ २० – इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारकलाई त्यहाँको एक अदालदले जन्मकैदको सजायँ सुनाएको छ । सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएकोमा दोषी ठहर गर्दै आदालतले ८४ वर्षिय मुबारकलाई जन्मकैदको सजायँ सुनाएको हो ।
विहार दोश्रो पटक पनि एक नंबरमा
जेठ २०– बिहार दोश्रो पटक पनि तिव्र विकास गर्ने भारतका राज्यको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको छ । गरिबी, पछौटेपन र अव्यवस्थाका लागि चिनिंदै आएको बिहारले विकासको गतिमा तिव्रता लिएकाले लगातार दुइ पटक पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।
सिरिया नरसंहार छानवीनको माग
जेठ २० – संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगले गएको हप्ता सिरियाको हौला शहरमा भएको नरसंहारको निन्दा गर्दै घटनाको छानवीनको माग गरेको छ । उच्चायोगले सिरिया सम्बन्धि एक प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै अपराधी पहिचान हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएको छ ।
विश्वभर विस्थापितको संख्या बढ्दैछ
जेठ १९ – संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी आयोगले विश्वभर विस्थापित हुनेको सख्या बढ्दै गएको बताएको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, सहरीकरण र खाद्य असुरक्षाका कारण बिस्थापित हुनेको सख्या बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
काश्मिरका चरमपन्थी संगठन शान्तिपूर्ण दैनिकीमा फर्कदै
जेठ १८ – काश्मिरको पक्षमा लामो समय देखि लड्दै आएका स्थानीय संगठनले अब संघर्ष त्यागेर शान्तिपूर्ण दैनिकीमा फर्किन शुरु गरेका छन् । काश्मिर आन्दोलनको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको र भारतले माफीको प्रस्ताव राखेपछि चरमपन्थी संगठनका सदस्यहरु संघर्ष त्यागेर अन्यत्रै जान थालेको बिबिसीले जनाएको छ ।
पेट्रोलको मुल्यवृद्धिको विरोधमा भारत बन्द
काठमाडौ, जेठ १८ – पेट्रोलमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा भारतीय जनता पार्टी सहितको गठबन्धनले बिहीबार भारत बन्द गरेको छ । बन्दको अरु विपक्षी दल, व्यापारीक तथा यातायात संगठनले पनि समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको समाजवादी पार्टीले पनि बन्दमा साथ दिएको छ ।
५० रुपैयाँ घुस माग्नेलाई ६ महिना जेल
जेठ १७ – भारतीय सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्तिले घुसको रकमका आधारमा सजायँबाट छुट नपाउने फैसला गरेको छ । १८ वर्ष अघि गुजरातका दुई जना सरकारी अधिकारीले ५० रुपैंया घुस मागेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
दुइ दशकपछि सुकी विदेश भ्रमणमा
जेठ १७ – झण्डै साढे दुई दशकमा पहिलोपल्ट विदेश भ्रमणमा निस्किएकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्ग सान सुकीले बुधवार थाईल्याण्डमा बस्दै आएका बर्मेली प्रवासी श्रमिक संग भेट गर्दै हुनुहुन्छ । सुकी मंगलवार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक पुग्नुभएको हो ।
हिउँ पहिरोमा पुरिएका १ सय ३९ जना मृत घोषित
जेठ १६ - पाकिस्तानी सेनाले सियाचिन ग्लेसियरमा ५२ दिन अघि हिउँ पहिरोमा पुरिएका १ सय २८ जना सैनिक सहित १ सय ३९ जनालाई मृत घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाले विज्ञप्ति निकालेर ११ सर्वसाधारण र १ सय २८ जना सैनिक मरिसकेको घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाको नर्दन लाईन एन्फेन्ट्रीको बटालियन हिउँ पहिरोमा परेको हो ।
राष्ट्रपतिका उमेद्वारको कार्यालयमा आक्रमण
जेठ १६ – इजिप्टको राष्ट्रपति चुनावका मुख्य उम्मेदवार अहमद शफीकको चुनाव प्रचार कार्यालयमा आक्रमण भएको छ । सयौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले कार्यालय रहेको भवनमा तोडफोड र आगजनी गर्नुका साथ पोष्टरहरु च्यातेर फालिलिएको बिबिसीले जनाएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री र म्यानमारका राष्ट्रपतिवीच भेट
जेठ १५ – भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह र म्यानमारका राष्ट्रपति थीन सीनबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
सिरियामा फेरि हिंसात्मक आक्रमण, ३० जनाको ज्यान गयो
जेठ १५ – सिरियामा ९० भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणको घटना नसेलाउँदै फेरी अर्को आक्रमण भएको छ । सिरीयाको होम्स् शहरमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा ३० जनाको ज्यान गएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री म्यानमारमा
जेठ १५ – भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह म्यानमार पुग्नुभएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले साढे दुई वर्षपछि म्यानमारको भ्रमण थाल्नुभएको हो । राजनीतिक भेटवार्ता र दुईदेशबीचको व्यापारका विषयमा प्रधानमन्त्री सिंहको टोलीले छलफल थाल्नेछ ।
अमेरिकी विमानस्थलमा बृद्धबृद्धालाई सुरक्षा जाँच खुकुलो
जेठ ४ – अमेरिकी विमानस्थलमा ७५ वर्ष भन्दा माथिका बृद्धबृद्धाको सुरक्षा जाँच केही खुकुलो पारिने भएको छ । विमानस्थल प्रवेश गर्ने क्रममा जुत्ता, बेल्ट र ज्याकेट फुकाल्न अनिवार्य भएपनि बृद्ध अवस्थाका यात्रुहरुलाई त्यस्तो जाँच नगर्ने तयारी भएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
हत्याको सिलसिला रोक्न सिरियालाई राष्ट्रसंघको आग्रह
जेठ १४ – सिरियामा भइरहेको हिंसात्मक घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियाली सरकारले खुल्लमखुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सिरिया ‘जनसंहार’मा बालबालिका सहित ९० जनाको मृत्यु
जेठ १३ – सिरियामा शुक्रबार भएका हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ९० जनाको ज्यान गएको छ । सिरियाको तनावग्रस्त होम्समा शुक्रबार सरकारी सेनाले गरेको गोलाबारी तथा हमलामा १३ जना बालबालिका सहित कम्तीमा ९० जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको तौल २० किलो !
जेठ १३ – सरकारी कर्मचारीको लापरवाही कतिसम्म हुँदो रैछ भन्ने कुरा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले भोगेका छन् । गहुँ खरिदमा आफूहरु ठगिएको किसानले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव आफै निरीक्षणमा निस्किए ।
एसएसबीको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गयो
जेठ १३ – नेपाल सीमावर्ती भारतको बरगनीयामा सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली चलाउँदा एक जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको छ । झण्डै २० जना गम्भीर घाईते भएका छन् ।
मानसिक रोगीको हत्या गर्ने सैनिकलाई ५० वर्ष जेल
जेठ १३ – कोलम्बियामा मानसिक रोगी व्यक्तिलाई विद्रोहीको आरोपमा हत्या गर्ने ६ जना सैनिकलाई ३० देखि ५० वर्ष सम्मको जेल सजाय सुनाईएको छ । उनीहरुले पदोन्नतीका लागि मानसिक रुपमा कमजोर २६ वर्षिय युवकलाई हत्या गरी विद्रोही भएको झूटो दावी गरेको पुष्टि भएपछि अदालतले जेल सजायँ सुनाएको हो ।
हिंसात्मक झडपमा सिरियामा ७० को ज्यान गयो
जेठ १३ – सिरियामा शुक्रवार भएका हिंसात्मक झडपमा ७० जनाको ज्यान गएको छ । होम्स प्रान्तमा मात्रै ५० र अरु क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपमा २० जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् । होम्समा भएको ज्यान गुमाउनेमा १३ जना बालबालिका छन् ।
अदालती फैसलाको आलोचनाप्रति सर्वोच्चको आपत्ति
जेठ १३– भारतीय सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि हुने नकारात्मक टिप्पणी र अदालती फैसलाको आलोचना हुने गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता गतिविधीले न्यायकर्मीको बद्नामी हुने र न्यायीक व्यवस्थामाथिको नागरिकको विश्वास घट्दै जाने ठहर गरेको छ ।
पुरुषको लागि पनि गर्भनिरोधक औषधी !
जेठ १२ - बेलायतको एडिनवर्ग विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले पुरुषका लागि गर्भनिरोधक औषधि बनाउन सकिने बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुले औषधि बनाउन सकिने जीन पत्ता लगाईसकेको बीबीसीले जनाएको छ । अहिले मुसामा त्यसको परीक्षण भैरहेको छ ।
घुसखोरी र अनियमिततामा भारतीय नीजि कम्पनी अगाडि
जेठ १२ – घुसखोरी र आर्थिक अनियमितताका काममा भारतीय कम्पनीका अधिकारीहरु सबैभन्दा अगाडि रहेको पाईएको छ । एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले २८ प्रतिशत उच्च अधिकारीहरुले नयाँ कारोबार शुरु गर्न र भएका ग्राहकलाई जोगाईराख्न जतिसुकै रकम लेनदेन गर्न पनि तयार रहेको देखाएको हो ।
अमेरिकाद्वारा पाकिस्तानमा सहयोग कटौतीको घोषणा
जेठ १२ – अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने आर्थिक सहायतामा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । अलकायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनको सुराकी गर्न अमेरिकालाई सहयोग गर्ने डाक्टर शकील अफरीदीलाई जेल सजायँ सुनाएपछि अमेरिकी सिनेटको एक समितिले ३ करोड ३० लाख डलर सहयोग राशी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विश्वभरको नेतृत्व परिवर्तनलाई संबोधन गर्न असफल
जेठ ११ – मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टी ईन्टरनेशनले विश्वभरको नेतृत्व आफ्नो देशमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको बताएको छ । आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा एमनेष्टीले गएको वर्ष विश्वका विभिन्न ठाउँमा भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले देखाएको साहसलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिएको बताएको हो ।
१४ वर्षसम्मका वालवालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
जेठ १०– भारतको उत्तर प्रदेशमा चौध वर्षसम्मका वालवालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार सेवा पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशनको सहयोगमा यस्तो योजना लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
इजिप्टमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदै
जेठ १० – इजिप्टमा बुधवार राष्ट्रपतीय चुनाव हुँदैछ । तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारकलाई सत्ताबाट हटाएको १५ महिनापछि नयाँ नेता चयनका लागि बुधवार र बिहीबार मतदान प्रक्रिया चल्नेछ ।
अदालतको फैसलालाई हाँसेर उडाएपछि ...
जेठ ९ – मलेसियामा दुई जना अभियुक्तले अदालतको फैसलालाई हाँसेर उडाउन खोजेपछि त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । मलेसियाको जोहर बारु अदालतले बलात्कार र डकैतीको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल र १२ कोर्रा लगाउने सजाय सुनाएकोमा त्यसको खिल्ली उडाएपछि अदालतले उनीहरुलाई तीन गुना भन्दा धेरै सजायँ तोकेको हो ।
भ्रूण हत्या गर्दै कुकुरलाई खुवाउँदै
जेठ ९ – भारतमा कन्या भ्रूण हत्याको आरोपमा पक्राउ परेको एक जना डाक्टरका बारेमा डरलाग्दो सत्य बाहिर आएको छ । महाराष्ट्र राज्यको बीड जिल्लाका डाक्टर सुदम मुन्डेले गर्भपात गराएपछि प्रमाण मेटाउन भ्रूण कुकुरलाई खुवाउने गरेको खुलासा भएको छ । यसका लागि ती डाक्टरले घरमा चारवटा कुकुर पालेको र आफ्नो काममा श्रीमतीको समेत सहयोग लिने गरेका थिए ।
रेल ठोक्किदा १५ जनाको ज्यान गयो
जेठ ९ – भारतको आन्ध्र प्रदेशमा दुईवटा रेल आपसमा ठोकिंदा कम्तीमा १५ जनाको ज्यान गएको छ । झण्डै ४० जना घाईते भएका छन् । हुबलीबाट बेंगलोरका लागि छुटेको यात्रुबाहक रेल अनन्तपुरमा रोकिराखेको मालवाहक रेलसंग ठोकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
१३ प्रतिशत युवाहरु रोजगारविहीन
जेठ ९ – विश्वभरका १३ प्रतिशत युवाहरु अहिले रोजगार बिहीन रहेको पाइएको छ । युवा बेरोजगारीको यो दरमा आउँदो चार वर्षसम्म सुधारको कुनै संभावना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले जनाएको छ ।
एनआरएन क्यानडाको पाचौ सम्मेलन
क्यानडा, जेठ ९ – क्यानडामा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरु (एनआरएन क्यानाडा)को पाँचौ सम्मेलन यडमन्टन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । क्यानडाको अलबर्टा राज्यको यडमन्टन सहरमा भएको सम्मेलनले नेपालको सुर्खेतमा रहेको मैनितडा गाविसलाइ नमुना गाउँ बनाउने, नेपालमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
अफगानिस्तानका दिनहरु चुनौतीपूर्ण छ : ओबामा
जेठ ८ – अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफगानिस्तानको लागि आउने दिनहरु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । अफगानिस्तानमा रहेका नेटो सेनालाई फिर्ता गराउने विषयमा सिकागोमा भइरहेको छलफलमा राष्ट्रपति ओबामाले अफगानको भविष्य अन्यौलताले भरिएको बताउनुभएको बिबिसीले जनाएको छ ।